Nkezi afọ iri na ụma | Martech Zone
Seth okwu taa na edemede site na LA Times. Ọ bụ ederede zuru ezu gbasara ụmụaka 12 ruo 24.
Ihe na-akpali mmasị bụ na isiokwu ahụ na-agwa ụmụaka okwu na Hollywood… mana nwa m nwoke (17) nọ ebe a na Indiana! Ga-ahụ na ọtụtụ puku kilomita na-ahụ obere ihe dị iche n'etiti abụọ, n'agbanyeghị. Kwa ụbọchị, lee ihe nwa m nwoke na - eme:
Na-emelite ya Myspace
Na-emelite ya blog
Dekọ egwu nke ya (Lelee BillKarr.com)
Ide egwu ya na ndi enyi ya
Gwakọta egwu site na iji Acid Music Studio
Na-aga ihe ngosi (obere egwu)
Ikwu banyere MySpaces ndị ọzọ
Na-ekwu okwu na ekwentị
Otu Ntorobịa Church
Agụ (M na-eme ya ka ọ gụọ… mana ọ na - amalite ịbịa gburugburu)
Bill na ndị enyi ya di na nwunye nọ na fim ugbu a. Ga na ihe nkiri mara mma nke ukwuu, ọ bụ ezie… ọ na-ebelata mmefu ego ya. Nwere ike chọpụta otu ihe na-efu na ndepụta ya… TV. Aghaghị m ịrịọ ya ka ọ bịa soro m lee ihe nkiri TV! Nwa m nwoke nwere ọgụgụ isi, nwee ezi obi ma nwee ahụike. N'oge gara aga, ọ na-agba bọl, basketball, baseball, skateboarding, rollerblading, wdg, wdg.
N’enyeghị m nsogbu, nwa m nwoke nwere ezigbo agwa ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ mmekọrịta. Ndị enyi ya niile yiri nnọọ. Ha nwere uto puru iche na egwu, uwe, ntutu, akpukpo ukwu, wdg… ha niile abughi isi. N'ezie, isi bụ onye iro. Nke na-eme ka m laghachi na Seth kwuru:
Ọ bụrụ n’ị na-agba ahịa dị ka ị dọtara uche m, ị mejọrọ nnukwu ihe.
Nwa m nwoke ga-abụrịrị nro nke ndị ahịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 'uto' ya niile sitere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ nweghị nke ọ bụla site na mgbasa ozi kachasị. Nke ahụ bụ n'ezie ihe ị ga-echebara echiche! Echeghị m na nwa m agwụla. N'ezie, echere m na ọ bụ ihe megidere ya. Ọ na-anwa ime ihe na-arụpụta kwa minit ọ bụla kwa ụbọchị. Ọ na-ebi ndụ n'ụzọ zuru oke ma ọ chọghị igbu oge ọ bụla.
Ma… n'adịghị ka ọtụtụ nna ndị na-eto eto, ọ naghị eme m ara. Ga-ahụ ka anyị na-achị ọchị ma na-agbagharị na abalị ọ bụla. Agaghị m akpọ ya dị ka onye ọkara - ọ bụ nwa okorobịa mara mma nke m nwere obi ike na ọ ga-enweta ọtụtụ ihe na ndụ.
PS: Achọrọ m iti mkpu ka ọ kpọpụrụ nkịta ahụ, mana m ga-emeso nke ahụ ụbọchị ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ihe nna m ga-eme!
PPS: Enwere m nwa nwanyị dị afọ iri na abụọ nke dịkwa oke egwu, mana ana m ewepụ ya na ịntanetị.